Okudingeka Ukwazi Nge-Labradoodle Yase-Australia - Izinhlobo
Kukhona olunye uhlobo lomklami edolobheni oluyifanele i-hype - i-Labradoodle yase-Australia!
Kepha ngama-doodle amaningi emhlabeni we-canine, abathandi bezinja kufanele bazi izinhlobo ezihlukile! Ngakho-ke ngaphambi kokungeza iLabradoodle yase-Australia njengengxenye yomndeni wakho, zinike isikhathi sokufunda ngazo.
Qhubeka ufunde umhlahlandlela wethu ukuze wazi ukuthi ngabe le yinhlanganisela efanelekile yini kuwe.
Umsuka: Umlando wase-Australian Labradoodle
Ngabe i-Labradoodle yase-Australia ibukeka kanjani?
Izici Nobuntu beLabradoodle yase-Australia
Ungayinakekela Kanjani I-Labradoodle Yase-Australia
Ingabe i-Labradoodle yase-Australia iyinja ephilile?
Ngingayithenga kuphi noma ngiyithole i-Labradoodle yase-Australia?
Amakilabhu Akhethekile Agxile Kuma-Labradoodles ase-Australia
Ukuqhathanisa iLabradoodle yase-Australia namanye ama-Doodle
Kungani Kufanele Ngithenge I-Labradoodle Yase-Australia?
Kulula ukusho ukuthi i-Aussie Labradoodle iyefana ne I-Labradoodle ejwayelekile . Ukuthi umehluko kuphela ungeze indawo evela kuyo. Kodwa akulula kangako.
Kungakho-ke sizokumba ngokujule ngokuthi yiziphi izinhlobo zezinhlaka ezakha le cutie!
Konke lokhu kwaqala ngo-1989 lapho owesifazane oyimpumputhe edinga inja yomsebenzi. Inkinga ukuthi, umyeni wakhe akazwani nezinja.
UWally Conron , Umphathi Wokuzala Wezinsizakalo Zezinja Eziqondiswayo e-Australia, waqala ukusebenza ekwakheni i-canine ene- isimo esiphelele senja yokusebenza futhi a hypoallergenic ijazi.
Uhlanganise izinja ezimbili ezihlanzekile ezilingana nencazelo. Wakhetha abasebenza kanzima I-Labrador retriever kanye neZinga elingachithi Poodle . Ngakho igama ILabrador-Poodle noma iLabradoodle .
Ngemuva kwale mpumelelo, uWally Conron wayefuna ukuthuthukisa lolu hlobo ngokuqhubekayo.
E-Australia ITegan Park neRutland Manor usizwe ngokuqhubeka nalokho okuqalwe nguWally. Baqhubeka bezalanisa iLabradoodles ukukhiqiza izinja ezinohlobo lwejazi olungaguquguquki, ubumnene, nokuhlangana.
Ukuze siqonde ukuthi onjiniyela bakwazi kanjani ukudala izimfanelo ezingaguquguquki zalolu hlobo, kuzodingeka sixoxe ngokuthi iLabradoodle yase-Australia yenziwa kanjani.
Yini Eyenza ILabradoodle yase-Australia?
ILabradoodle yase-Australia ingahlukaniswa kanjena uma kuhlangatshezwana nemibandela emi-2:
Ukuzalaniswa kweLabradoodle kufinyelele esizukulwaneni sesi-5
Uhlu lozalo lwenja luqukethe iLabrador, Poodle, ne-American Cocker Spaniel
Ngokungafani nezinye izinhlobo zezinambuzane ezinabazali abahlukene abamsulwa, i-Aussie Labradoodle ingakhiwa izinhlobo ezintathu, noma ibe ngumphumela wokuzala okuqhubekayo kweLabradoodles.
Ukuzalela okuqhubekayo kusho ukuthi kuzodingeka uwele amaLabradoodle amabili nawo anabazali bakaLabradoodle. Lapho nje imidlwane abayikhiqizile isikhule ngokugcwele, yenza leyo nqubo kahlanu (izizukulwane ezinhlanu), bese uyithola I-Labradoodle yase-Australia , ahlukahlukene izizukulwane ezihlukene. Yileyo ndlela abenza ngayo lolu hlobo ekuqaleni.
Futhi uma ucabanga ukuthi lokho kuzala ngokwanele ukwenza le nja emangalisayo, izinhlangano ezakha i-Labradoodle yase-Australia azigcinanga lapho. Babazi ukuthi bangathola izici ezinhle kakhulu kulolu hlobo ukuze luphelele!
Ukwenza lokho, bona wanezela ngokucophelela ezinye izinhlobo emigqeni yeLabradoodle obekungakwenza lokho ulethe izici ezifiseleka ngokwengeziwe , futhi lezo zinja yilezi:
I-Irish Water Spaniel
I-Curly Coat Retriever
I-English Cocker Spaniel
I-American Cocker Spaniel
Zingeze, kufaka phakathi iLabrador nePoodle, bese kuthi i-Aussie Labradoodle ibe nayo inani eliphelele lezinhlobo eziyisithupha zabazali .
Zonke izinhlobo zabazali zazinokuthile ezingakuletha etafuleni, kepha ukuxuba okuvame kakhulu esetshenziselwa ukudala iLabradoodle yase-Australia yiPoodle, iLabrador Retriever, ne-American Cocker Spaniel.
Abathuthukisi balolu hlobo babevame ukusebenzisa i-American Cocker Spaniel ngoba kwakuyinja yokugcina abayengeze kwi-Labradoodle yase-Australia, futhi babona ukuthi iletha izici ezingaguquguquki kunezinye izinja.
Ngakho-ke ake singene futhi sixoxe ngezimpawu ezingaguquguquki zale Doodle enhle.
Kuyinto evamile ukuthi ukubukeka akuyona yonke into , kodwa njengoba sincike eqinisweni lokuthi ama-Labradoodles ase-Australia aphelele nje, ukubukeka kwawo kuzoqedela uhlu lwakho lokuhlola.
Zifana nezilwane ezifakiwe ezithandekayo nge amakhulu futhi ayindilinga, amehlo ansundu lokho kuzokwenza uthandane! Ezinye zazo zize zibe nemibala yamehlo ezosukela enhlanhleni emnyama kuye kwamehlo aluhlaza okotshani. Futhi bane- impumulo enkulu emise okwesikwele .
Umbala wempumulo weLabradoodle wase-Australia ungaba mnyama, ube nombala obomvana, noma ube nsundu ngokubomvana / upinki, kodwa ubungahluka kuye ngohlobo lwejazi labo.
I-Aussie Labradoodles ine- isikwele, isitokisi sakha , futhi inomsila olandela umugqa ophezulu lapho unyakaza kodwa akufanele ugoge ngokuphelele ngemuva.
Ingakanani I-Labradoodle Yase-Australia?
Akunandaba ukuthi uhlala kuphi nokuthi isikhala sakho sikhulu noma sincane kangakanani, unenhlanhla! Kusukela umzali kaPoodle iza ngosayizi abathathu , kanjalo ne-Aussie Labradoodle. Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhetha!
Usayizi ojwayelekile Ama-Labradoodles ase-Australia zingamasentimitha angaba ngu-21 kuye kwangama-24 (amasentimitha angama-53 kuye kwangama-61) futhi zingaba nesisindo esingamakhilogremu angama-45 kuye kwangama-77 (20 kuye kuma-35 kg).
Okulingene Ama-Labradoodles ase-Australia zingamasentimitha angu-17 kuye kwangama-20 ubude (amasentimitha angama-43 kuye kwangama-51) futhi zingaba nesisindo esingamakhilogremu angama-30 kuye kwangama-45 (14 kuye kuma-20 kg).
Ama-Miniature yibo abasikiwe bodwa! Zingamasentimitha angu-14 kuye kwangama-16 ubude (amasentimitha angama-36 kuye kwangama-41) futhi zizosinda cishe ngamakhilogremu angu-15 kuye kwangama-30.
Kufanele ugcine engqondweni lokho abesilisa ngokuvamile inkulu kunezinja zesifazane . Kepha ngokuqhathanisa okungcono, nali ishadi elibonisa osayizi beLabradoodle yase-Australia lapho selikhulile ngokuphelele:
ISHAYI LESIKHULU Ukuphakama Isisindo
I-Labradoodle ejwayelekile yase-Australia
Amasentimitha angama-21 kuya kwangu-24
(53 kuya ku-61 cm)
Amakhilogremu angama-45 kuye kwangama-77
(20 kuya ku-35 kg)
I-Labradoodle Ephakathi yase-Australia
Amasentimitha angu-17 kuya kwangu-20
(43 kuya ku-51 cm)
Amakhilogremu angama-30 kuye kwangama-45
(14 kuya ku-20 kg)
I-Labradoodle encane yase-Australia
Amasentimitha angu-14 kuya kwangu-16
(36 kuya ku-41 cm)
15 kuya ku-30 ​​amakhilogremu
(7 kuya ku-14 kg)
Njengoba zitholakala ngosayizi abathathu, i ifulethi noma a ikhaya elinamagceke amaphakathi ngosayizi kuzokwanela futhi kufanelekile ukwenza le nja ijabule. Okubalulekile ukuthi bathola umthamo wabo wansuku zonke wokuzivocavoca umzimba nengqondo.
Ijazi LaseLabradoodle Lase-Australia Nombala
Siyazi ukuthi le pooch fluffy ibukeka njengomuntu ozoba ngumlingani ophelele, kodwa bewazi ukuthi inakho izinhlobo ezintathu zamajazi ?
Okubohliwe ngoboya: Lawa athambile kasilika futhi angaba kusuka eboyeni obucishe buqonde noma obuvulekile aye kwe-wavy.
Kuboshwe ngoboya: Kufana noboya bewundlu futhi kunomuzwa ofana nowokotini ekuthinteni. Kufana nePoodle’s kodwa inomoya ovulekile ovuleka kalula esikhunjeni.
Uhlobo lwezinwele: Kungakhathaliseki ukuthi iqondile noma i-wavy kancane, uhlobo lwezinwele luyisiqhwaga ekuzizweleni futhi lungaba nalo lelo phunga lezinja. Noma ngabe ukhetha ukuthi i-Doodle yakho ibe nezinwele ezimfishane noma zibe nezinwele ezinde, lolu hlobo luyingubo yesondlo ephansi futhi lunamazinga ahlukahlukene okuchitheka.
I-Aussie Labradoodles nayo iza nge imibala ehlukahlukene , njenge-parti, emhlophe, ibhilikosi, ushokoledi, omnyama, ukuhlangana, nokuningi!
Uma uthatha isinqumo sokuthola umdlwane wase-Australian Labradoodle, ungamangali uma wakhe izinguquko zombala wejazi. Kungaba mnyama noma kuphele njengoba ekhula.
Ukulungisa i-Aussie Labradoodle's Hypoallergenic Coat
Akunandaba ukuthi i-Labradoodle yakho yase-Australia inhloboni yengubo, zibuze kuqala: “ Ngifuna inja yami ibe nokubukeka okunjani? ”Futhi“ Ngifuna ukuthi ijazi lakhe libe yinde kangakanani? ”.
Njengoba ijazi le-Labradoodle lase-Australia belithuthukiswa ngokuqhubekayo eminyakeni engama-35 edlule, kunjalo kude nokuthola isici sokuchitha weLabrador.
Kepha noma bewuhlobo olungachitheki, basadinga ukuzilungisa njalo.
Ungakwazi ukuxubha ijazi lakho le-Doodle kabili ngeviki ukuvimbela ukumila, kanye nokugcina uboya bakhe bunempilo futhi buhlanzekile. Uma inja yakho ingaphakathi endlini, ukuxubha njalo ezinsukwini ezimbalwa nangesikhathi esithile ukugeza kuzokwanela.
Izikhathi zokuzilungisa zingasho nesikhathi sokuhlanganisa wena nenja yakho, kepha uma wazi ukuthi udinga usizo lochwepheshe, khumbula umuse kumkhwenyana njalo ezinyangeni ezi-2 ukuya kwezi-3 ukugcina ijazi okulula ukuligcina.
Uma kwenzeka uzibuza, ukubukeka kwe-shaggy kungenye yezinwele ezithandwa kakhulu noma funa ama-Labradoodles ase-Australia.
Ngenkathi sikudaba lokuzilungisa, ungakhohlwa ukusika izinzipho zakho ze-Labradoodle zase-Australia njalo amasonto amabili kuya kwamane bese uxubha eyakhe amazinyo njalo ngenyanga . Ezindlebeni, hlola njalo ngenyanga bese ususa izinwele zangaphakathi njalo ukugwema ukutheleleka ngenxa yokushoda komoya.
Nayi ividiyo ekhombisa imiyalelo eyisisekelo yokuzilungisa yama-Labradoodles ase-Australia yi-ALAA:
Izandla phansi, zonke izinja ziyamnandi! Kepha bewazi ukuthi i-First Generation Labradoodle ijwayele ukuba namandla kakhulu? Ama-Labradoodles ase-Australia akude nalokho. Kunjalo ukuzola , olinganiselayo , enembile , futhi ukuvuthwa . Kepha namanje kumnandi kakhulu ukuba seduze naye, noma ngabe ukudlala endlini noma ngaphandle!
Kunesizathu futhi sokuthi kungani uzwe futhi ufunde izinto eziningi ezinhle ngalolu hlobo, futhi kungenxa yezimfanelo ezinhle ezitholile kubazali bayo.
Njenge-Poodle, ama-Labradoodle ase-Australia anjalo uhlakaniphile kakhulu, uyashesha futhi unobungane . Kuyinjabulo ukuba nabo ngoba bangaba bahle kuyahlekisa ngezikhathi!
Lolu hlobo luzoba futhi ilungele imindeni nezingane. Vele uqiniseke ukuthi ugada izingane zakho ezincane noma nini lapho ziseduze nomdlwane noma i-Mini Australian Labradoodle yakho ukugwema ukulimala.
Ngaphandle kwalokho, i-Aussie Labradoodles yilezi qotho , kuhle nezinye izinja nezilwane ezifuywayo , abesabi ukukhombisa uthando nokuzinikela kwabo, futhi kunjalo umhlahlandlela omkhulu futhi izinja zokwelapha - njengabazali babo beLabrador Retriever neSpaniel.
Ngakho konke abanganikela ngakho, uyikhombisa kanjani inja yakho ukuthi uyabathanda? Ngokunakekelwa okufanele, kunjalo!
Ngabe Ukuvivinya Kangakanani Okudingwa Yi-Labradoodle Yase-Australia
Yize lolu hlobo lulungele zonke izinhlobo zasekhaya, inja yakho isadinga ukuzivocavoca umzimba ukuze ikhulule amandla ayo asetshenzisiwe kusuka kuso sonke leso sikhathi esichithwa endlini.
Uma i-Aussie Labradoodle yakho iba nesithukuthezi, ingafuneki isimilo ingahle ikhule. Okudingeka ukwenze ukumgcina ejabule ngokunikeza imisebenzi eminingi yengqondo nengokwenyama yansuku zonke.
ILabradoodle yase-Australia inezinga lamandla aphansi ukuya kokulingene, ngakho-ke a Imizuzu engama-30 kuye kwengama-40 Ukuhambahamba ngosuku kungakwanela.
Ngaphandle kokuhambahamba, ungaphinde uthathe inja yakho iye ekugijimeni, ekugijimeni, ekuhambeni izintaba, noma, uma kuwumsebenzi wakho wokuzilibazisa, ngisho nokuzingela! Ama-Labradoodles ase-Australia uyawathanda amanzi , futhi. Uma unechibi, noma uma uhlala eduze kwechibi noma nolwandle, mhambise, futhi ubuzombona engena ezobhabha futhi abhukude.
Uma ungenaso isikhathi sokukhipha inja yakho uhambe, indawo engemuva ebiyelwe iyisimo esihle sokudlala ukulanda nayo. Lo mdlalo osebenzayo ungagcwalisa kalula imizuzu engama-20 kuye kwengama-30 yesamba esidingekayo sokuvivinya umzimba se-Aussie Labradoodle.
Ngaphandle kwemisebenzi ebonakalayo, iDoodle yakho izodinga nokuvuselelwa kwengqondo. Ngakho-ke ukumnikeza ukuzijabulisa kwasendlini njengokuhlafuna, iphazili, noma ukudonsa amathoyizi kuzomphonsela inselelo ngokwengqondo.
Eminye imikhiqizo edumile yalolu hlobo yizinhlobo ze- Kong Extreme futhi I-Outward Hound Nina Ottoson Dog Brick Phatha i-Puzzle Dog Toy . Ukunikeza izinketho zakho eziningana ze-Aussie Labradoodle kungamenza angabi nesithukuthezi, futhi kuzophinde kumnake ekuhlafuneni ifenisha noma izicathulo zakho.
Ukuqeqesha iLabradoodle yase-Australia
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngale canine ukuthi zingabo smart futhi kulula ukuqeqesha . Bangalanda imithetho yakho namasu omfundisa wona ngesikhathi esincane nje.
ISEXWAYISO! Kusukela ngesikhathi oletha ngaso i-Labradoodle puppy yakho yase-Australia, zimise njengomholi wepakethe wendlu noma womndeni. Lolu hlobo lungakudukisa futhi luhlakulele isimo sengqondo sokudelela uma engakhuliswanga, engahlanganyeli, futhi eqeqeshwe kahle.
Qinani kodwa nizole i-alpha futhi ulwe nalezo zinkinga zokuziphatha ngokuzivocavoca umzimba nengqondo, futhi uqiniseke ukuthi wena namathela esimisweni . Ngaso sonke isikhathi gcina izikhathi zakho zokuqeqesha zibandakanya futhi zizinhle. Ungakwenza lokho ngokusebenzisa ukuphatha, ukuvuza, nokudumisa ukuze ushukumise noma iyiphi inja.
Yiba ongaguquguquki futhi ubekezele . Uma inja yakho noma injana yakho ingakwazanga ukulandela imiyalo noma wenza ingozi kukhaphethi wakho owuthandayo, ungalokothi usebenzise amathoni anokhahlo noma amagama, futhi ube mnene. Okuhlangenwe nakho okungekuhle ngeke kusize ngalutho.
Bukela futhi ulalele ukuthi lo mnikazi wenja uyinikeza kanjani imiyalo / amaqhinga alula ngenkathi ekhuthaza uTeddy ngokuphatha nokudumisa.
Masiqhubeke nempilo ephelele yalolu hlobo olumangazayo ngoba akudingeki nje ukuthi wondle ingqondo nomphefumulo wakho we-canine onobungane, kepha nezidingo zomzimba ze-Aussiedoodles.
Ama-Labradoodles ase-Australia anezimfanelo ezinhle kakhulu, kepha abanikazi bezinja banemithwalo yemfanelo eminingi kunokumane bathathe izinja zabo uma behamba.
Ngaphandle kokuzuza njengefa izinkinga zezempilo ezivela kubazali bayo, i-Aussie Labradoodle iza ngosayizi abathathu. Lokho kusho ukuthi kuzofanele unake izidingo ezithile ze-Doodle oyikhethayo.
Izinto ezilula njengokugwema i-Mini Australian Labradoodle yakho ukuthi yeqe ifenisha noma yehle noma yehle ngezitebhisi kungasiza ukuvimbela izinkinga ezihlangene, noma ukwazi ukuthi uzomondla malini, ukuze angakhuluphali. Ngemuva kwakho konke, into engcono kakhulu ongayenza ukukhombisa ukuthi usithanda kangakanani isilwane sakho ngokumnakekela.
Ukudla Kufanele Inja Esebenzayo Kangaka
Zonke izinja zifanelwe ukudla okuseqophelweni eliphezulu, izinhlobo kanye nosayizi ukuqinisekisa ukuthi zihlala ziphilile.
Ngakho-ke ngaphambi kokukhetha uhlobo oluthile lokudla noma ukudla kwenja nge-Aussie Labradoodle yakho, cela udokotela wezilwane wakho kuqala ukuthi aqiniseke ngenani lokudla nebhalansi yokudla okunempilo.
Nikeza i-Labradoodle yakho yase-Australia 2 nohhafu wezinkomishi ezi-3 kokudla kwezinja nsuku zonke futhi yehlukanise kabili .
Kukuwe ukuthi uyondla ngasiphi isikhathi inja yakho, inqobo nje uma ingalambi kakhulu futhi ngandlela thile iyahambisana. Okwenziwa ngabanikazi abaningi ukondla umngani wabo onoboya kanye ekuseni kanye nakusihlwa.
Uma ukhetha ukudla okuzenzela noma okuluhlaza noma okulinganayo ukudla kwezinja okusezingeni eliphakeme , Ukuphela kokufanele ukwenze ukunciphisa inani lokudla okomile onika umngani wakho woboya ukumvimbela ekutholeni kakhulu.
Uma i-Labradoodle yakho yase-Australia ikhuluphele ngokweqile
Inja ekhubazekile ingabukeka iyinhle, kodwa ngabe ubeke impilo yesilwane sakho engcupheni. Uma ucabanga ukuthi ukhuluphala ngokweqile, ungahlukanisa izinkomishi zakhe zansuku zonke ezi-2 kuye kwezingu-3 zokudla kwezinja zibe yizidlo ezintathu esikhundleni sezimbili ezijwayelekile.
Futhi noma ngabe i-Labradoodle yakho yase-Australia incenga kangakanani ngalolohlo lothando, ungamniki izigaxa zethebula nokudla okungenamsoco komuntu.
Ezinye izinto ongazenza ukumsiza anciphise isisindo ziguquka zibe ukudla okunamafutha amancane kepha ukudla okuphezulu kwenja yefayibha.
Kunokudla okuningi kwama-canine okuzobasiza ukuthi balahlekelwe ngamakhilogremu ngenkathi ukugcina amalunga abo enempilo ngoba ukukhuluphala kungathinta ukuhamba kwenja yakho.
Kufanele futhi unamathele ku- ukuphatha inja anama-calories aphansi. Zama ukuhlinzeka izithelo esikhundleni salokho, njengezicucu ezincane zama-apula noma izaqathe.
Okwe-Labradoodles base-Australia abanesisindo esincane
Njengoba sine-Labradoodles yase-Australia engadla kakhulu, kunezinja ezithile ezingenaso isifiso esikhulu kangako futhi ezingaba nesisindo esincane. Kungenzeka ukuthi iDoodle yakho ibishisa amandla amaningi, kodwa qiniseka ukuthi yehlisa isisindo hhayi ngenxa yokugula okuyimbangela.
Uma enempilo yize emncane, ungasiza i-pooch yakho ukuthi ikhuluphale. Ungakwazi engeza enye inkomishi Ukudla kwenja ekudleni kwakhe kwansuku zonke. Ngakho-ke kusuka kuzinkomishi ezi-2 kuye kwezi-3, ungazenza zibe yi-4 bese uzihlukanisa kabili noma kathathu ngosuku.
Ungashintsha futhi ekudleni kwenja okuhlosiwe imidlwane esikhundleni sabantu abadala.
Kusho ukuthi akudingeki unikeze inja yakho izinkomishi eziningi ngoba ama-calories akhuphukile kubalulekile ukuqinisekisa ukukhula okwanele kwemidlwane.
Bhekisisa ukuthi i-Labradoodle yakho yase-Australia idlani nokuthi ingakanani. Ungalungisa imvamisa yezikhathi zokudla nobungako bokudla ukuze ubone ukuthi yikuphi okusebenzayo. Futhi qiniseka ukuthi isilwane sakho sithola ukuzivocavoca okuningi.
Ukwazi ukuthi i-Doodle yakho ifinyelele esisindweni esinempilo futhi iyasigcina, kufanele ithole ukuhlolwa kokuphila kahle njalo ezinyangeni eziyisithupha kuya kweziyishumi nambili ukugwema ukubuyela emuva ekubeni mncane kakhulu noma ukhuluphele.
ILabradoodle yase-Australia imvamisa iyinzalo enempilo, kepha akekho noyedwa ongabona kusengaphambili konke ukukhathazeka kwezempilo okungathinta inja yakho engumklami.
Esingakwenza nje ukufunda ngemvelaphi yale Doodle nangezinkinga zomzali ezingaba khona ukuze sizazi futhi ngethemba lokuthi, sinciphise noma sigweme amathuba okuthi isilwane sakho sithole noma yini yaso.
Ama-crossbreeds adla ifa lezinkinga ezivamile zezempilo ezithinta abazali babo, kanti ezinye zalezo iLabradoodle yakho yase-Australia engazithola yilezi:
Izifo zikaVon Willebrand
Kufanele futhi uqaphele ukuthi ngabe i-Labradoodle yakho yase-Australia ivame ukulunywa nokunwaya, okungaba wuphawu lokuthi une-allergies.
Esinye sezizathu ezingemuva kwalokhu ukuthi i-Aussiedoodle yakho ingahle iguliswe yisithako esithile ekudleni kwayo okufana nezinhlamvu noma inkukhu. Ayigcini ngokuholela ekucasukeni kwesikhumba, kepha futhi nezinkinga zokugaya ukudla.
Futhi kuzodingeka ucabangele izinto ezibalulekile njenge-Doodle's yakho ubudala nezimo zezempilo . Izinto ezinjengokuthi, inani lokudla okuzodingeka umdlwane lihlukile kunalokho okufanele ukunikeze i-Labradoodle yase-Australia endala.
Ungahlala ushintshela ku-hypoallergenic ukudla kwenja noma phatha nge-Aussiedoodle yakho yokungezwani komzimba. Izosiza ukuphatha, hhayi kuphela ijazi lakhe nesikhumba, kepha kanye nempilo yakhe yokugaya ukudla.
Uma i-Doodle yakho ikhipha iso, ukunakekelwa okufanele nokuhlanzwa kuyindlela engcono yokubhekana nayo. Kepha uma ibonakala iluhlaza noma yimuphi omunye umbala, yenza i-aphoyintimenti nodokotela wezilwane ukuthi uyihlole.
Sebenza futhi uthintane nodokotela wezilwane othenjiwe ukugcina i-doodle yakho iphilile ngangokunokwenzeka futhi mhlawumbe (iminwe iwele) i-Labradoodle yakho yase-Australia izodlula isilinganiso sayo isikhathi sokuphila seminyaka eyi-13 kuya kwengu-15 !
Manje njengoba sifunde amaqiniso abalulekile noma imininingwane mayelana ne-Australian Labradoodle, ake siqhubekele lapho ungayithola khona.
Lapho izinhlobo ezihlanganisiwe zibandakanyeka, kufanele umbe ujule noma kunini lapho wenza ucwaningo lwakho. Kufanele uqaphele kakhulu lapho ufuna umfuyi onamathela emazingeni abalimi ababhalisiwe nabaziwayo.
Futhi lapho uthatha isinqumo sokuthenga, qiniseka ukuthi uthenga kumuntu ongazitholi imidlwane ye-Labradoodle yase-Australia kusuka ezigidini zemidlwane.
Ubungeke uthande ukuzibandakanya kulokho futhi ubasekele ngengozi. Futhi, kuzoba nethuba elikhulu lokuthi ekugcineni, kuzoba nenkinga ngokuhlakanipha kwenja yakho noma impilo yabo.
Ibiza malini i-Australian Labradoodle?
Udoti wase-Australia waseLabradoodle uvame ukuba nemidlwane eyisishiyagalombili, ngakho-ke ayivamile kangako. Kepha ezinye zezinto ezingathinta intengo kungaba umfuyi, uhlu lozalo nendawo.
Ngokuvamile, umdlwane wase-Labradoodle wase-Australia ungabiza kakhulu $ 2,700 kuya ku- $ 3,000 .
Kungani ama-Labradoodles ase-Australia ebiza?
Akungenxa nje yokuthi i-Labradoodle yase-Australia iyinja yomklami, kodwa futhi ngenxa ye- ukufuya isitoko .
Uma umfuyi esebenzisa isizukulwane esiphakeme se-Doodle futhi enza ukuhlolwa okuningi kwezempilo kubazali, kungaba nengqondo ukuthi i-Aussiedoodle iyabiza.
Njengoba i-Aussiedoodle kungeyona i-hybrid yakho ejwayelekile, abalimi batshala isikhathi sabo, ukuzinikela kwabo nemali yabo ukugxila ekukhiqizeni lolu hlobo lwenja.
Futhi lokho okwenza amaLabradoodles ase-Australia abize imali yakho. Uzokhokhela i- umlingani wekhwalithi ephezulu wekhwalithi ephezulu ngezimfanelo ezingaguquguquki futhi ezimangazayo.
Abafuyi BaseLabradoodle Base-Australia
Uma ufuna ukuthenga umdlwane we-Aussie Labradoodle, ungabheka i- abafuyi bamalungu we-Australian Labradoodle Association of America.
I-Australian Labradoodle Club of America ikunikeza inketho yokubona i-International, US, ne-Canada yabo amalungu okuzalanisa .
Ngaphandle kwalabo, nakhu abanye babalimi be-inthanethi abagxile kohlobo lweLabradoodle ne-Australian Labradoodle:
I-Bunji Australian Labradoodles (EMidwest Michigan, e-US)
I-Archview Labradoodles (E-Illinois, e-US)
Izwe Eliphezulu Labradoodles yase-Australia (UKeene, NH, US)
I-Aussie Labradoodle (EColumbus, e-Ohio, e-US)
ILomond Hills Labradoodles (EScotland, e-UK)
Ukwamukela noma ukuphinda uqalise ama-Labradoodles ase-Australia
Uma uthathe isinqumo sokuthola, ukutakula, noma ukufaka kabusha i-Labradoodle yase-Australia, siyayisekela leyo 100%!
Ngeke nje uthole umngane we-canine; usindisa nempilo yaleyo nja.
Bheka lawa mawebhusayithi anikezela ngezinketho eziningi kuwe:
I-Sugar Pine Doodles (Isifunda sase-Amador, eCalifornia)
IDaisy Hill Labradoodles (ENingizimu Oregon)
Ukutakulwa Kwamadwala e-Doodle (IDallas, eTexas)
I-Labradoodles yase-Hale yase-Australia (E-Central California)
IMountain Park Labradoodles (EPortland)
Sishilo ukuthi kunezinhlangano noma amakilabhu asebenza kanzima ukuvikela nokuqhubeka nokwakhiwa kolayini base-Labradoodle base-Australia, nokuqinisekisa ukuthi ukuzaliswa kuyalandelwa ngokucophelela.
Lawo maqembu afanelwe ukwamukelwa, futhi yilezi:
LAA - ILabradoodle Association yase-Australia
IALA - I-International Australian Labradoodle Association
FTAA - I-Australian Labradoodle Club yaseMelika
LUTHO - Inhlangano Yomhlaba Wonke yase-Australia yeLabradoodle
ALAEU - I-Australian Labradoodle Association Europe
Lawa makilabhu abuye afunde nokuthi yiziphi izinhlobo zezinja okufanele zivunyelwe ukwethula ngokucophelela emigqeni ekhethiwe.
Futhi njengoba iLabradoodle yase-Australia iyinhlanganisela noma iyinja yomklami, i- I-American Kennel Club (AKC) ayiluboni lolu hlobo, kepha i-Dog Registry of America Inc (DRA) iyalubona.
Ingabe ufuna ukwazi ngezinye izingxube zePoodle laphaya? Ukubheka ngokushesha umehluko wabo kwi-Labradoodle yase-Australia kungasiza kakhulu.
Futhi kuyinto enhle ukufunda ngezinye izinhlobo zama-Doodles ngoba lokho kusho ukuthi uzoba nezinketho eziningi uma uthanda uhlobo oluthile oluwelewe nePoodle.
I-Australian Labradoodle VS Standard Labradoodle
Omunye umehluko phakathi kwalaba ababili ukuthi amanye ama-Labradoodle ayachitha lapho ama-Labradoodles ase-Australia engasebenzi, okwenza kube ukukhetha okuthandwa ngabantu abane komzimba .
Ama-Labradoodles ayizinja ezinhle zomndeni kodwa angaba nomsindo ngakho umuntu omdala kufanele abheke lapho bezungeze izingane.
Uma inhlanganisela yeLabrador-Poodle ingakutholi ukunakwa nokuzivocavoca okwanele, ingathuthukisa izingqinamba zokuziphatha njengokukhonkotha noma ukuhlafuna. Ama-Labradoodles ase-Australia ayi ukuzola , ngeke idlale lapho inesithukuthezi, futhi kulula ukuyiqeqesha.
Kepha iLabradoodles inothando olukhulu futhi izinja ezinhle zensizakalo.
I-Australian Labradoodle VS Bernedoodles
Umdlwane weBernedoodle ( umthombo )
Njengama-Labradoodles ase-Australia, Ama-Bernedoodles ezolile futhi emnene. Kepha uBernes angaba nenkani ngesikhathi esengumntwana, futhi ungalindela ukuthi leso simo sengqondo sizohamba njengoba bekhula.
AmaBernedoodles nawo ayathandeka futhi enza i- inja yomndeni enhle kakhulu , kepha bangaba nenkinga yokugcina umndeni osebenzayo ngoba amandla abo aphansi.
Futhi akuzona ezamakhaya amancane futhi zingaba kude nabantu ongabazi. Ngaphandle kwalokho, kulula kakhulu ukuhamba.
I-Australian Labradoodle VS Goldendoodles
Uma kukhulunywa ngobumnene, iGoldendoodle icishe ifane neLabradoodle yase-Australia.
Inobungani, inhlalo, futhi inothando, akumangazi ukuthi yenza okuhle njengesiqondisi, insizakalo, noma inja yokwelapha. Umxube weGolden Retriever-Poodle ngu kuhle ngezingane nezilwane ezifuywayo futhi kulula ukuyiqeqesha.
IGoldendoodles ngeke yenze okuhle uma uyiyeka yodwa isikhathi eside noma uma ungayinaki ngokwanele.
I-Australian Labradoodle VS Sheepadoodles
I-Sheepadoodle ( umthombo )
I- Imvu yezimvu luhlobo olulula nokuqeqesha ngoba luhlakaniphile.
Bangenza okuhle emndenini onezingane, kodwa kufanele ugade.
Le nja ayikakhohlwa isici sayo sokwelusa futhi ibizozama ukukwenza kubalingani babo abadlala nabo, futhi ingahle iqhume!
Yize kunjalo, ama-Sheepadoodle ayathokoza futhi enza inja yokubuka enhle.
Sekukonke, lolu hlobo luphelele njengoba kungenzeka ukuthi ludlulise zonke izinto okufanele uzibheke lapho usesha futhi ukhetha inja: ubuntu obukhulu noma ubuntu, ubuhlakani , ukuvumelana ngokuvumelana , futhi ijazi elisezingeni eliphezulu .
Kodwa-ke, ukuze ufinyelele esinqumweni, kuzodingeka ulinganise ubuhle nobubi bokuba ne-Labradoodle yase-Australia.
Le Doodle ilungele amakhaya amaningi nemindeni, kanye nabantu abahlukunyezwa yimizimba - ngisho nalabo abathanda ukungcola nephunga elincane ngaphakathi emakhaya abo.
Izinhlobo zamajazi ezingcono, okuwuhlobo loboya noboya bezimvu, zivame ukuba namafindo kanye nokugunda kodwa. Ngakho-ke wena ne-Aussie Labradoodle yakho niyodinga ukujwayela inqubo yokuzilungisa.
Futhi le nja idinga imisebenzi ehlukahlukene yansuku zonke - kusuka ekuhambeni kuya ekugijimeni, nasekuhlafuneni nasekucabangeni. Uma uhlala ungekho ngenxa yomsebenzi noma ukhetha ukuchitha isikhathi sakho endlini, khona-ke le canine ethanda ukuba sendleleni akuyona eyakho.
Umxube we-Labradoodle wase-Australia wuhlobo oluhlakaniphile futhi ungakuthola kangcono ngesimo salo sobuqili. Kepha ukuqeqeshwa kusenesikhathi nokufakazela ukuthi ngubani umholi wepakethe kuzokwazisa uDoodle wakho ngendawo yakhe.
Kepha sekukonke, lolu hlobo luhamba phambili kakhulu imnene pooch ongayifisela!
Ucabangani ngeLabradoodle yase-Australia? Sazise konke ngezindaba zakho nemibono yakho maqondana ne-Aussie Labradoodles, futhi sabelane ngamathiphu noma izeluleko!
Thayipha konke kumazwana angezansi bese uvumela abanye bafunde noma bamane bagxumele phezu kwezinganekwane zakho ezinhle zesilwane!
Amagama amaLabhu Amnyama angama-75: Amagama Amahle, Agqamile & Ahamba Phambili AmaLabradors
umalusi waseJalimane oxutshwe nempisi yokhuni
zibiza malini izinja zengwe ze-catahoula
igolide retriever lab mix impilo yonke
ukuqeqeshwa komxube wase-german pitbull mix